Izindaba - Yini Isokhethi Esiphansi?
Isokhethi laphansi liyi-plug receptor etholakala phansi. Lolu hlobo lwesokhethi lungenziwa ngezinhlobonhlobo zamaplagi, kepha luvame ukusetshenziselwa ukuxhuma ngogesi, ucingo noma ikhebula. Ukusetshenziswa kwezisekelo eziphansi kulawulwa kakhulu ngamakhodi wokwakha ezindaweni eziningi.
Amasokhethi kagesi noma izitolo zivame ukutholakala ezindongeni.
Ezimweni eziningi, ugesi nezinye izinhlobo zamasokhethi noma izitolo zitholakala ezindongeni noma kumabhodi aphansi. Egumbini lokuhlala elijwayelekile noma elezentengiselwano, amasokhethi anjalo ngokuvamile atholakala ibanga elifushane ngaphezu kwephansi futhi angabekwa ngaphezu kweziqongo zamanani ezindaweni zokugeza nasemakhishini. Ngokwakhiwa okujwayelekile kwezimboni, izindawo eziningi ezinjalo zifakwa ezindongeni noma ezigxotsheni eziseduze nemishini. Kwezinye izimo, noma kunjalo, isokhethi eliphansi liyathandeka ngoba livimbela ukusebenza kwezintambo ezindaweni lapho zingadala khona ingozi yohambo.
Isibonelo, igumbi lokuhlala lingahle limiswe ngendlela yokuthi osofa abakwazi ukubekwa ezindongeni ngaphandle kokuvimba ukungena kwamanye amakamelo. Uma umninikhaya efuna ukubeka isibani sokufunda emaphethelweni kasofa, kuzofanele agijimise intambo enqamula phansi aye odongeni oluseduzane lukagesi. Lokhu kungahle kungakhangi. Kungabeka nobungozi bokuthi isilwane noma ilungu lomndeni lingakhubeka kule ntambo, okungadala ukulimala kukathathu nakulambu. Ukubekwa kwesokhethi phansi eduze kombhede kususa le nkinga.
Uhlangothi lwe-flip lohlamvu lwemali ukuthi ama-plugs abekwe kumasokhethi angaphansi angabekwanga kahle angaba yingozi yokuhamba ngokwawo. Lokhu kuyiqiniso ikakhulukazi ezakhiweni zezimboni nezentengiselwano lapho isikweletu sihlala sikhathaza. Izisekelo eziphansi nazo zicatshangwa ngabaningi ukuthi zibeka ingozi enkulu yomlilo kunezisekelo zodonga.
Ukufaka izitolo phansi ngesikhathi sokwakha okusha kungaba yinkohliso kwezinye izingxenye zomhlaba. Amakhodi amaningi wokwakha akuvimbela ukufakwa kwesokhethi phansi ngokuphelele. Abanye bagunyaza ukuthi zifakwe kuphela kumathayela aqinile anjengothayela noma ukhuni hhayi kufulethi elithambile njengokufaka ukhaphethi. Abanye bavumela izindawo zokuhlala ezakhiweni zezimboni kepha hhayi ezakhiweni zokuhlala noma ezentengiselwano, kanti ezinye zisho okuphambene ngqo.
Ukuhlanganisa izintambo noma ukufaka isokhethi phansi esakhiweni esivele sikhona kungavunyelwa noma kungavunyelwe ngekhodi. Uma kunjalo, ikhodi ingadinga ukuthi umsebenzi wenziwe ngusibanikazi onelayisense. Uma amakhodi endawo evumela ukufakwa kwezisekelo eziphansi, umnikazi wesakhiwo kufanele akhumbule ukuthi ukufakwa okunjalo kungabiza noma kungenzeki uma ugesi engakwazi ukungena ngaphansi kwangaphansi, njengasesimweni sokhonkolo. Uma phansi kusezingeni lesibili, ingxenye yophahla engezansi ingadinga ukususwa ukuze kufakwe isokhethi.